Microsoft - omunye yezinkampani ezinkulu zamazwe ngamazwe, onguchwepheshe ukukhiqizwa software zonke izinhlobo electronics - hhayi emi namanje. Futhi isixazululo omusha lula izimpilo abasebenzisi 'ekudalweni kwezethulo, kwaba Sway isicelo. Kuyini lokhu hlelo futhi iyini okwamanje uzame ukuqonda.
Isixazululo entsha ngokuphelele
Sway - isixazululo entsha ngokuphelele, okuyinto yakhelwe lula futhi ukusheshisa inqubo yokudala izethulo ezibukwayo - nezethulo. Ngaphambi nje kokukhululwa kwe-software entsha emakethe kukhona omunye multi-functional futhi elungiselelwe umkhiqizo kuphela - PowerPoint. Isici esiyinhloko uhlelo lokusebenza olusha isibe jikelele.
Kodwa Sway isicelo yakhelwe ukudala hhayi kuphela izethulo, kodwa futhi amawebhusayithi. Ngaphambi kwalokho, "Microsoft" Uzame ukukhulula umkhiqizo ukuma ukudala Intanethi - FrontPage. Kodwa ngezizathu ezingaziwa, akazange abe ethandwa kakhulu phakathi abasebenzisi PC.
Ukufinyeleleka - isici esiyinhloko Sway. "Kuyini lokhu hlelo, okuyiwona udinga ukulanda ukufakwa iphakethe?" - uma program ucela inkampani ngendalo yakhe, ngoba naye kubalulekile kuphela ukufinyelela ku-intanethi. Xhuma kwisevisi Iwebhu ingaba kunoma iyiphi idivayisi, kodwa uthanda "zakudala" ungakwazi ukufaka isicelo kukhompyutha yakho.
Imakethe digital has a lot of zokusebenza ongazisebenzisa ukudala nezethulo. Kodwa kulokhu, "Microsoft" esenze intuthuko yangempela futhi kuvikelwe ezinkulukazi ukukhubazeka Sway. Kuyini lokhu hlelo? Kungani ngeke ukuncintisana namanye izicelo? Iphuzu izinzuzo umkhiqizo:
Versatility - wonke amathuluzi ngokudala nezethulo (ifonti umhleli, ama-animation, imisindo) endaweni eyodwa.
Ukutholakala okwandile - ukusebenza ukudalwa yephrojekthi uzokwazi kunoma imuphi umsebenzisi, ngisho kokuba i-akhawunti ohlelweni "Microsoft".
Ukulondolozwa - zonke izingxenye Ngokuzayo nezethulo ngomumo egcinwe "ifu" amasevisi kwalezo ababengazisebenzisa kuncishiswe ingozi ukulahleka, umonakalo noma ukweba zero.
Ukuhlanganisa - lokusebenza imatasa nge amanethiwekhi omphakathi; Abelana isethulo kungenziwa ukuthumela umngane.
Imakethe akubanga izicelo ukuthi obungalindela izenzo umsebenzisi eziye ukusebenza ngo Sway. Kuyini lokhu hlelo, okuyinto ngokuzimela ukhetha izifanekiso, ngokwezifiso layout umbhalo ngesisekelo algorithm kusengaphambili? Manje uyazi impendulo.
Kusukela lokusebenza yasungulwa futhi wadedelwa ngemva kokukhululwa kwe-Windows 10, it is hhayi kufakwe iphakethe ejwayelekile kwezicelo ehhovisi. Ukuze uqale ukusebenzisa Umbuso indawo, umane ubuyekeze Office365 iphakethe lakho. Uhlelo Ungalanda futhi esitolo, kodwa lokhu kubalulekile ibhaliswe ohlelweni.
Indlela yesibili ukuze siqale ukudala i isethulo - ukuya ngokuqondile kwisayithi isevisi interactive. Ukuze uqalise, uzodinga i-akhawunti "Microsoft" bese ubhalisele Sway.com indawo. Ukulandela Uyi manipulations ezimbalwa ezilula izotholakala service Sway. Kuyini lokhu hlelo? Ingabe kudingekile? Imibuzo enjalo ingabe ukubuza ngeke.
Ukudala amaphrojekthi akho, udinga kuphela uxhumano lwe-Inthanethi. Khiphela, bese wengeza idatha interactive - izithombe, amavidiyo, imisindo - uzokwazi ukuvula izikhala inethiwekhi emhlabeni. Ukuze wenze lokhu, kumele ucacise izixhumanisi kuphela amafayela.
okunezinhlobonhlobo elikhulu izifanekiso, imiphumela ekhethekile ukwenza kube lula ukusebenza isethulo, futhi ngokushesha nje uhlelo lokusebenza ngeke baqonde algorithm yakho, ungakwazi ukusheshisa inqubo ngezinye izikhathi, ngezinye izikhathi ngokulungisa imvume. Emuva ekuhleleni amaslayidi nganoma yisiphi isikhathi ngokumane ebonakalayo ngokusebenzisa iphrojekthi efana incwadi.
Ukushintsha inqubo yokudala izintshumayelo Sway. Kuyini lokhu Windows 10 uhlelo? Lowo owenza wonke umsebenzi ngawe!
Yini isikhulu loan?
"Phenibut": izinkomba ukusetshenziswa, ukubuyekezwa kanye analogue
Kuyini ubisi namakhakhasi izakhiwo awusizo.